'Aniga waa la i kufsaday, hadda waxaan u baqayaa gabdhaheyga' - Jigjiga Online
HomeWararka Caalamka‘Aniga waa la i kufsaday, hadda waxaan u baqayaa gabdhaheyga’
Shacabka dalka Koonfur Afrika ayaa aad uga careysan falalka kufsiga iyo dilalka loo geysto haweenka oo kusii badanaya waddankaas.
Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee lasoo tabiyay waxaa ka mid ah gabar iskuuley ah oo sida lagu soo warramay madaxeeda qeyb ka mid ah laga gooyay iyo ardayad jaamacad dhiganeysay oo garaacis lagu dilay.
Falalka kufsiga iyo dilalka ayaa sababay inay shacabka qaarkood dibadbaxyo ka sameeyaan waddooyinka, waxaana barta Twitter-ka laga billaabay ol’ole lagu magacaabay #MaAnigaaQofkaKuxiga.
In ka badan 500,000 oo ruux ayaa baraha Internet-ka ku saxiixay cabasho dowladda looga dalbanayo inay dib usoo celiso xukunkii ciqaabta dilka ah, si wax looga qabto dambiyada faraha kasii baxaya.
Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa wacad ku maray in howlgallo isdaba joog ah lagula tacaali doono dambiyada noocan ah.
Sarah Midgley, oo 37 jir ah, waa haweeney Sawir Qaade ah oo labo carruur ah dhashay, waxayna ku nooshahay magaalada Johannesburg.
Wali waxay kasoo kabaneysaa niyad jabkii ay ka qaadday fal kufsi ah oo loo geystay muddo ku dhawaad 10 sano ah ka hor.
Wariyaha Barnaamijka Haweenka ee BBC-da, Esther Akello Ogola, ayey uga warrantay sheekadeeda.
Ninkii aan horay saaxiibka u ahaan jirnay ayaa i kufsaday sanadkii 2010-kii, waxayna ahayd mar u dhow xilligii ay ciyaaraha koobka adduunka ka dhacayeen waddanka Koonfur Afrika.
Saaxiibkeygii hore wuxuu muddo 18 bilood ah ii geysanayay tacaddi igugu jiro garaacis iyo niyad jabin ilaa markii dambe aan ku dhiirraday inaan ka tago.
Marar badan ayaan ugu hanjabay inaan ka tagi doono, laakiin xilli walba oo aan isku dayaba wuxuu sii badin jiray dhibka uu igu hayay.
Wuxuu ila dhici jiray haraati, mararka qaarna wuu i ceejin jiray wuuna i qaniini jiray.
Wuxuu iigu hanjabi jiray inuu gabdhaheyga ku kufsan doono horteyda haddii aan go’aansado inaan ka tago. Xitaa mararka qaar wuxuu igu cabsiin jiray bastoolad.
Cidna lama wadaagi jirin arrintan sababtoo an waan xishoonayay waxaana ka baqayay in ceeb la iiga dhigo inaan nafteyda difaaci wayaay.
Waxaan sidoo kale gooni ka noqday saaxiibadii kale iyo qoyskeygaba, waayo waxaan ka walwalsanaa in aan waayo cid i caawisa, saaxiibkeygii horena wuxuu iga dhaadhiciyay in qoyskeyga iyo saaxiibadeyba aysan wax dan ah iga yeelan doonin. Sidoo kalena waxaan ku fikirayay inuu waxyeello u geysan doono carruurteyda.
Markii aan helay geesinnimada aan uga tagay, waxaan u baxay si qarsoodi ah. Laakiin 10 maalmood ka dib wuxuu soo istaagay albaabkeyga.
Wuxuu iga dalbaday inaan u sameeyo asxaankii ugu dambeeyay.
Wuxuu ii ballan qaaday inuu nolosheyda ka fogaan doono haddii aan gaarigeyga ku geeyo beer uu abtigiis lahaa. Balse hadda oo sanado badan laga joogo waan ka qoomameeyaa inaan xilligaas rumeystay ballantiisa beenta ahayd.
Markii aan beerta adeerkiis geeyay isla markii aan gaariga istaajiyayba wuxuu igu soo qaaday weerar gaadmo ah, haraati ayuu ila dhacay waana suuxay.
Xoogaa ka dib markii aan soo naaxay, waxaan joogay meel ka mid ah aseendada beerta, isagana dusha ayuu iga saarnaa.
Nin kale oo saaxiibkiis ah ayaa agtiisa joogay, markii uu isaga iga dhargayna, ninkii kale ayaa i kufsaday.
Mar labaad ayaan suuxay, markii aan dib u soo naaxayna waxaa ila joogtay haweeney ka mid ah shaqaalaha nadaafadda ee beerta, waxayna isku dayeysay inay biyo iiga dhaqdo wasakhdii i gaartay, qaar ka mid ah dharkeedana way igu dabooshay.
Maalmo ka dib waxaan ogaaday in ninkii falkaas ii geystay lagu sii daayay damiin, uuna ka cararay magaalada.
Laakiin ugu dambeyn waa la xiray waxaana lagu xukumay 8 sano oo xabsi ah. Sanadkii 2017-kii ayuu u geeriyooday nooc ka mid ah xanuunka kansarka, ka dib markii uu 7 sano ku jiray xabsiga.
Runta markii aan ka hadlo, xilligaas ayey ahayd markii ugu horreysay ee aan si fiican u neefsado.
Geeridiisa ka hor, waxaan ku qarwi jiray isagoo mar kale nasoo weeraraya aniga iyo carruurteydaba.
Xitaa waxaan u guuray guriga waalidiinteyda, maadaama aan aad uga cabsan jiray inaan kaligey noolaado.
Markii aad tahay qof ka baqa masaska, waxaad ka cabsaneysaa mas oo dhan, xitaa kuwa aan sunta lahayn.
Nasiib darro, hadda waxaan ka baqayaa nin oo dhan. Waxaan isku dayaa inaan la iga dareemin laakiin uma maleynayo in raggu ay ogyihiin sida ay qof u cabsi galin karaan.
Waxaan aad ugu baqaa gabdhaheyga
Muddo sannado ah ayaa la ii sameynayay niyad dhis, maadaama aan qalbi jab weyn ka qaaday wixii igu dhacay.
Arrinta ugu xun ee aan la kulmi karo, anigoo ah hooyo lasoo kufsaday, waa in carruurteyda ay maraan xanuunkii aan maray.
Musiibo ayey ii noqoneysaa haddii wixii igu dhacay ay ku dhacaan gabdhaheyga.
Aad baan ugu baqaa gabdhaheyga. Waxaan usoo iibiyay telefoonno, mar walbana waan ka war qabaa xaaladdooda, meel kasta oo ay ku sugan yihiin.
Aniga Shakhsi ahaan, ma aaminsani in dowladda Koonfur Afrika ay dadaal ku filan u sameysay sidii loo ilaalin lahaa haweenka iyo carruurta.
Kiisaska carada weyn ka abuuray dalka Koonfur Afrika tan iyo bishii Agoosto:
Gabar dhigata dugsiga hoose, oo lagu magacaabo Janika Mallo, da’deeduna ay tahay 14 sano, ayaa la kufsaday waxayna geeriyootay markii sida muuqatay madaxa looga dhugtay dhagax weyn oo sababay in qeyb ka mid ah madaxeeda ay go’do. Wali ma jirto cid loo xiray mas’uuliyadda falkaas.
Gabar 19 jir ah oo lagu magacaabo Uyinene Mrwetyana, isla markaana dhigayesay sanadka koowaad ee jaamacadda ayaa lala galay qolka ragga ee xafiiska boostada, waa la kufsaday ka dibna waxaa la garaacayay ilaa inta ay ka dhimato. Waxaa falkaas loo maxkamadeynayaa mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska boostada.
Jesse Hess, oo 19 jir ah, oo iyadana ku jirtay sanadkii koowaad ee Jaamacadda ayaa meydkeeda laga helay qolkeeda jiifka, waxaana musqusha isla gurigaas lagu xirxiray awowgeed oo 85 jir ah. Ma jirto ilaa hadda cid falkaas loo xiray.
Gabar feeryahanad ah oo lagu naaneyso “Baby Lee” Jengels, oo 25 jir ah, ayuu gaari dhexdiis toogasho ugu dilay nin ay horay saaxiib ula ahaan jirtay, kaasoo ah askari ka tirsan booliska. Wuxuu isagana markii dambe u dhintay dhaawac kasoo gaaray shil uu la galay gaariga, xilli uu isku dayayay inuu baxsado.
Haweeney lagu magacaabo Meghan Cremer, oo 30 jir ah, kana tirsan ciyaartoyda tartanka fardo fuulka, ayaa meydkeega laga helay god aan qota dheereyn, waxaana la sheegay inuu xarig uga xirnaa qoorta. Saddex qof ayaa dacwad loogu soo oogay falkaas dilka ah.
Qeybo ka mid ah jirka haweeney lagu magacaabo sales coach Lynette Volschenk, oo 32 jir ah, ayaa laga helay boorso dhex taalla guri. Qof lagu tuhunsan yahay falkaas ayaa la xiray.